मा 192-168-1-1 आईपी ​​ठेगाना जानकारी, बाट http पहुँच://192-168-1-1l.com, हाम्रो मुख्य प्राथमिकता को एक हाम्रो पर्यटकहरू गोपनीयता छ. यो गोपनीयता नीति कागजात संकलन र रेकर्ड छ भन्ने जानकारी को प्रकार समावेश 192-168-1-1 आईपी ​​जानकारी ठेगाना र हामी यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने.
थप प्रश्न छ वा हाम्रो गोपनीयता नीति बारे थप जानकारी आवश्यक भएमा, jaypol929@gmail.com मा इमेल मार्फत सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस्
192-168-1-1 आईपी ​​ठेगाना जानकारी लग फाइलहरू प्रयोग एक मानक प्रक्रिया निम्नानुसार. यी फाइलहरू लग आगंतुकों तिनीहरूले वेबसाइट भ्रमण गर्दा. सबै सेवा प्रदायक कम्पनीहरु यो र होस्टिंग सेवाहरु को एक भाग के’ विश्लेषण. लग फाइलहरू संकलित जानकारी इन्टरनेट प्रोटोकल समावेश (आईपी) ठेगाना, ब्राउजर प्रकार, इन्टरनेट सेवा प्रदायक (ISP), मिति र समय टिकट, सङ्केत / निस्कनुहोस् पृष्ठ, र संभवतः क्लिक संख्या. यी व्यक्तिगत रूपमा पहिचान छ भन्ने कुनै पनि जानकारी गरिएका छैनन्. जानकारी को उद्देश्य विश्लेषण रुझान लागि हो, साइट प्रशासन, ट्रयाक प्रयोगकर्ता’ वेबसाइटमा आन्दोलन, र डेमोग्राफिक जानकारी भेला.
अन्य कुनै पनि वेबसाइट जस्तै, 192-168-1-1 आईपी ​​ठेगाना जानकारी 'कुकीहरू' प्रयोग. यी कुकीहरू सहित जानकारी आगंतुकों भण्डारण गर्न प्रयोग गरिन्छ’ प्राथमिकताहरू, र आगन्तुक पहुँच वा भ्रमण कि वेबसाइटमा पृष्ठ. जानकारी प्रयोगकर्ता अनुकूलन गर्न प्रयोग गरिएको छ’ आगंतुकों आधारित हाम्रो वेब पेज सामग्री अनुकूलन द्वारा अनुभव’ ब्राउजर प्रकार र / वा अन्य जानकारी.
गुगल डबल क्लिक डार्ट कुकी
तेस्रो-पक्ष विज्ञापन सर्भर वा विज्ञापन नेटवर्क कुकीहरू जस्तै प्रविधिहरू प्रयोग गर्दछ, जाभास्क्रिप्ट, वा वेब उनको सम्बन्धित विज्ञापन र लिंक प्रयोग गरिन्छ कि विकनहरूको कि देखा 192-168-1-1 आईपी ​​ठेगाना जानकारी, जो प्रयोगकर्ता सीधा पठाइएका छन्’ ब्राउजर. जब यो हुन्छ तिनीहरूले स्वतः तपाईंको IP ठेगाना प्राप्त. यी प्रविधिहरू आफ्नो विज्ञापन अभियानको प्रभाव मापन गर्न र / वा विज्ञापन सामग्री भनी तपाईं जानुहोस् भनेर वेभसाइटमा हेर्न व्यक्तिगत प्रयोग गरिन्छ.
याद 192-168-1-1 आईपी ​​ठेगाना जानकारी तेस्रो-पक्ष विज्ञापनदाताहरु द्वारा प्रयोग गरिन्छ कि यी कुकीहरू भन्दा कुनै पहुँच वा नियन्त्रण छ.
तेस्रो Pary गोपनीयता नीतिहरू
192-168-1-1 आईपी ​​ठेगाना जानकारी गोपनीयता नीति अन्य विज्ञापनदाता वा वेबसाइट लागू हुँदैन. यसरी, हामी सम्बन्धित गोपनीयता यी तेस्रो-पक्ष विज्ञापन सर्भर को अधिक विस्तृत जानकारी को लागि नीतिहरू परामर्श गर्न सल्लाह गर्दै. यसलाई केही विकल्पहरू को-अप्ट आउट गर्ने बारे आफ्नो अभ्यासहरू र निर्देशन समावेश हुन सक्छ. तपाईं यहाँ यी गोपनीयता नीतिहरू पूर्ण सूची र तिनीहरूको लिंक पाउन सक्छ: गोपनीयता नीति लिंक.
तपाईं आफ्नो व्यक्तिगत ब्राउजर विकल्प मार्फत कुकीहरू असक्षम चयन गर्न सक्नुहुन्छ. विशिष्ट वेब ब्राउजरहरु कुकी व्यवस्थापन अझ बढी विस्तृत जानकारी थाहा, यो ब्राउजर मा पाउन सकिन्छ’ सम्बन्धित वेबसाइट. कुकीज के हुन्?
इन्टरनेट प्रयोग गर्दा हाम्रो प्राथमिकता अर्को भाग बच्चाहरु को लागि सुरक्षा थप छ. हामी आमाबाबु र अभिभाबकहरुको पालन गर्न प्रोत्साहन, भाग, र / वा निगरानी र आफ्नो अनलाइन गतिविधि पुस्तिका.
192-168-1-1 आईपी ​​ठेगाना जानकारी जानिजानि को उमेर मुनिका बच्चाहरु कुनै पनि व्यक्तिगत रूपमा पहिचान सूचना सङ्कलन छैन 13. तपाईं आफ्नो बच्चा हाम्रो वेबसाइटमा जानकारी यस प्रकारको प्रदान लाग्छ भने, हामी तपाईंलाई तुरुन्तै हामीलाई सम्पर्क गर्न कडा प्रोत्साहन र हामी द्रुत हाम्रो रेकर्ड देखि यस्तो जानकारी हटाउन हाम्रो सबै भन्दा राम्रो प्रयासको गर्नेछ.
यो गोपनीयता नीति मात्र हाम्रो अनलाइन गतिविधिहरु लागू र जानकारी सादर तिनीहरूले साझेदारी र / वा सङ्कलन हाम्रो वेबसाइट आगन्तुकहरूलाई लागि मान्य छ 192-168-1-1 आईपी ​​ठेगाना जानकारी. यो नीति छैन लागू कुनै पनि जानकारी संकलन अफलाइन वा यो वेबसाइट भन्दा अन्य च्यानलहरू मार्फत छ.
हाम्रो वेबसाइट प्रयोग गरेर, तपाईं एतद्द्वारा हाम्रो गोपनीयता नीति गर्न सहमत र यसको नियम र सर्तहरू गर्न सहमत.